22 Afei Yosua frɛɛ Rubenfo ne Gadfo ne Manase abusuakuw fã no,+ 2 na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Moadi nea Yehowa akoa Mose ka kyerɛɛ mo nyinaa so,+ na me nso moayɛ aso ama me wɔ biribiara mu.+ 3 Saa nna dodow yi nyinaa+ moannyaw mo nuanom de besi nnɛ, na moadi Yehowa mo Nyankopɔn mmara nsɛm so.+ 4 Afei Yehowa mo Nyankopɔn ama mo nuanom ahome, sɛnea ɔhyɛɛ wɔn bɔ no.+ Enti monsan nkɔ mo ntamadan mu, asase a Yehowa akoa Mose de maa mo wɔ Yordan agya no so.+ 5 Na monhwɛ nni ahyɛde+ ne mmara a Yehowa akoa Mose de maa mo no so; monnɔ Yehowa mo Nyankopɔn,+ na momfa n’akwan so+ nni n’ahyɛde so,+ na momfa mo ho mfam ne ho,+ na momfa mo koma nyinaa+ ne mo kra nyinaa+ nsom no.”+ 6 Afei Yosua hyiraa+ wɔn na ogyaa wɔn kwan sɛ wɔnkɔ wɔn ntamadan mu. 7 Mose de Basan maa Manase abusuakuw fã no,+ na Yosua nso maa abusuakuw no fã a aka no ne wɔn nuanom nyinaa agyapade wɔ Yordan atɔe fam.+ Bere a Yosua regya wɔn kwan akɔ wɔn ntamadan mu no, ohyiraa wɔn nso. 8 Na ɔtoaa so ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Momfa ahonyade ne nyɛmmoa ne dwetɛ ne sika ne kɔbere ne nnade ne ntade bebree nkɔ.+ Na mo ne mo nuanom nkyɛ asade+ a munya fii mo atamfo hɔ no.” 9 Afei Rubenfo ne Gadfo ne Manase abusuakuw fã no ne Israelfo a aka no dii mpaapaemu, na wofii Silo a ɛwɔ Kanaan asase so no de wɔn ani kyerɛɛ Gilead+ asase so, agyapade a Yehowa nam Mose so de maa wɔn sɛ wɔntena so no.+ 10 Bere a woduu Yordan mantam mu wɔ Kanaan asase so no, Rubenfo ne Gadfo ne Manase abusuakuw fã no sii afɔremuka wɔ Yordan ho. Ná ɛyɛ afɔremuka+ kɛse soronko bi. 11 Akyiri yi, Israelfo a aka no tee+ sɛ wɔrekeka sɛ: “Hwɛ, Rubenfo ne Gadfo ne Manase abusuakuw fã no asi afɔremuka wɔ Yordan mpɔtam, Kanaan hye so, wɔ Israelfo no afã hɔ.” 12 Bere a Israelfo no tee no, Israel asafo no nyinaa+ boaboaa wɔn ano wɔ Silo+ sɛ wɔne wɔn rekɔko.+ 13 Na Israelfo somaa+ ɔsɔfo Eleasar ba Finehas+ kɔɔ Rubenfo ne Gadfo ne Manase abusuakuw fã no nkyɛn wɔ Gilead asase so, 14 na wɔde mpanyimfo du kaa ne ho. Woyii ɔpanyin biako fii Israel agyanom abusuakuw biara mu. Eyinom na wɔdeda wɔn agyanom fie ano, Israel mpempem mu.+ 15 Bere a woduu Rubenfo ne Gadfo ne Manase abusuakuw fã no nkyɛn wɔ Gilead asase so no, wɔde too wɔn anim+ sɛ: 16 “Yehowa asafo no nyinaa+ se yemmisa mo sɛ, ‘Dɛn nti na moayɛ adebɔne+ yi atia Israel Nyankopɔn, na moadan+ afi Yehowa akyi akosi afɔremuka?+ Ɛnyɛ atua na moatew atia Yehowa nnɛ yi? 17 Bɔne a yɛyɛe wɔ Peor+ a ɛkɔfaa ɔhaw baa Yehowa asafo so a ɛde besi nnɛ yentumi ntew yɛn ho yi nnɔɔso?+ 18 Ɛnnɛ nso moasi mo bo sɛ mobɛdan afi Yehowa akyi. Munhu sɛ sɛ motew atua tia Yehowa nnɛ a, ɔkyena Israel asafo no nyinaa na ɛbɛsoa n’abufuw.+ 19 Sɛ asase a wɔde ama mo no ho agu fĩ+ a, ɛnde mommra mmɛtena yɛn nkyɛn wɔ Yehowa asase+ so, baabi a Yehowa ntamadan si+ no. Sɛ musi afɔremuka foforo ka Yehowa yɛn Nyankopɔn afɔremuka no ho a, na moretew atua atia Yehowa,+ na yɛn nyinaa bɛdan atuatewfo. Monnyɛ saa! 20 Ɛnyɛ Sera ba Akan+ na ɔfaa nneɛma a wɔkae sɛ wɔnsɛe no no? Nso ɛnyɛ Israel asafo no nyinaa na wɔsoaa ɛho abufuw?+ Ɔno nkutoo anwu wɔ ne bɔne no mu.’”+ 21 Ɛnna Rubenfo ne Gadfo ne Manase abusuakuw fã no ka kyerɛɛ+ Israel mpempem so mpanyimfo no sɛ:+ 22 “Tweaduampɔn+ Nyankopɔn+ Yehowa, Tweaduampɔn Nyankopɔn Yehowa+ na onim,+ na Israel nso behu.+ Sɛ yɛatew atua+ anaa yɛayɛ adebɔne bi atia wo Yehowa+ a, ɛnde, nnye yɛn nnɛ. 23 Sɛ yesii afɔremuka no sɛ yɛde redan afi Yehowa akyi, anaasɛ yesii sɛ yɛbɛbɔ ɔhyew afɔre anaa aduan afɔre+ anaa asomdwoe afɔre wɔ so a, ɛnde Yehowa ankasa bebisa ho asɛm.+ 24 Ɛnyɛ biribi a yesuro nti na yɛyɛɛ eyi? Yɛkae wɔ yɛn tirim sɛ, ‘Daakye bi mo mma bebisa yɛn mma sɛ: “Dɛn na mo ne Yehowa Israel Nyankopɔn no wɔ yɛ? 25 Yehowa de Yordan ayɛ ɔhye ato yɛne mo Rubenfo ne Gadfo ntam. Munni kyɛfa biara wɔ Yehowa mu.”+ Ɛba saa a, mo mma bɛma yɛn mma agyae Yehowa suro.’+ 26 “Enti yɛkae sɛ: ‘Momma yɛnyɛ ho biribi; momma yensi afɔremuka. Yɛremmɔ ɔhyew afɔre anaa afɔre foforo biara wɔ so, 27 na mmom ɛbɛyɛ adanse wɔ yɛne mo+ ne yɛn nkyirimma ntam sɛ yɛde yɛn hyew afɔre ne yɛn asomdwoe afɔre ne afɔre foforo a aka+ bɛba Yehowa anim abɛsom no, na ɔkyena bi mo mma anka ankyerɛ yɛn mma sɛ: “Munni kyɛfa biara wɔ Yehowa mu.”’ 28 Enti yɛkae sɛ, ‘Sɛ ɛba sɛ ɔkyena bi wɔka saa kyerɛ yɛne yɛn nkyirimma a, yɛbɛka sɛ: “Monhwɛ Yehowa afɔremuka sɛso a yɛn agyanom yɛe. Ɛnyɛ ɔhyew afɔre anaa afɔre foforo biara nti na wɔyɛe, na mmom wɔyɛe sɛ ɛnyɛ adanse wɔ yɛne mo ntam.”’ 29 Ɛmpare yɛn sɛ yɛbɛhyɛ da atew atua atia Yehowa na yɛadan yɛn ho afi Yehowa akyi+ akosi afɔremuka foforo aka Yehowa yɛn Nyankopɔn afɔremuka a esi ne ntamadan anim no ho, na yɛabɔ ɔhyew afɔre ne aduan afɔre anaa afɔre foforo biara wɔ so!”+ 30 Bere a ɔsɔfo Finehas+ ne asafo no mu mpanyimfo+ ne wɔn a wɔdeda Israel mpempem ano a wɔka ne ho no tee asɛm a Rubenfo ne Gadfo ne Manasefo kae no, wohui sɛ ɛtɔ asom. 31 Enti ɔsɔfo Eleasar ba Finehas ka kyerɛɛ Rubenfo ne Gadfo ne Manasefo no sɛ: “Ɛnnɛ yɛahu sɛ Yehowa wɔ yɛn ntam,+ efisɛ moanyɛ eyi sɛ mode resɔre atia Yehowa. Na moagye Israelfo afi Yehowa nsam.”+ 32 Afei ɔsɔfo Eleasar ba Finehas ne mpanyimfo no ne Rubenfo ne Gadfo no dii mpaapaemu+ wɔ Gilead asase so, na wɔsan baa Israelfo a aka no nkyɛn wɔ Kanaan asase so bɛbɔɔ wɔn amanneɛ.+ 33 Israelfo no hui sɛ asɛm no tɔ asom; enti Israelfo no hyiraa Onyankopɔn,+ na wɔanka bio sɛ wɔne Rubenfo ne Gadfo bɛkɔ akɔko asɛe asase a wɔte so no. 34 Na Rubenfo ne Gadfo no too afɔremuka no din, efisɛ “ɛyɛ adanse wɔ yɛn ntam sɛ Yehowa ne nokware Nyankopɔn no.”+